Lọ ihe mkpofu ahihia - China Ndị na-emepụta mkpofu ahịhịa, ndị na-eweta ngwaahịa
Lingtụgharị ihe mkpofu nwere ike ịbụ ebe a na-ekpofu ahịhịa. Mkpọ ndị a kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nnukwu ihe omume, n'ozuzu mpaghara a ga-enwe nnukwu ahịhịa, nnukwu ahịhịa. N'ebe ọha na eze dị ka ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ebe a na-achọkwa ịnakọta ọtụtụ akwụkwọ, karama, ma ọ bụ ite, a na-ahọrọ nnukwu ahịhịa.
13L / 23L / 42L Square plasticbin-B035 / B034 / B033
Igosipụta ụdị profaịlụ dị ala, isi akụkụ anọ nwere nkuku dị nchara / ihe mkpofu dị mma maka ọfịs na iji ụlọ n'ihu n'ụlọ nri. Ejiri agba dị iche iche na-agbanwe agbanwe dị iche iche mara mma. Ọ bụ nnukwu mgbakwunye na ebe nnabata / ụlọ nnabata gị, ma ọ bụ jiri ya na azụ azụ na obere ụlọ ahịa gị dị mma ka ndị ọrụ gị wee nwee ike kpochapụ mpempe akwụkwọ ọ bụla achọghị, ma ọ bụ ọbụlagodi iji deskside.
23L / 42L Square dustbin na mkpuchi-B031 B032
Deskside containers bụ ohere-oru oma, echekwa, na ihe dị mfe ma dị irè deskside n'efu na imegharị ihe maka iji ihe ngwọta.
23L / 42L / 58L Quadrate atherchịkọta Bin -B-013 / B-014 / B-015
Nke a bụ ezigbo mkpofu ahịhịa na-enweghị kọntaktị nwere ihe mkpuchi, ọ nwere ike ikpuchi ahịhịa unyi, na swing ga-egbochi gị ịmetụ mkpofu ahịhịa.
58L agbanye mkpuchi atherchịkọta Bin-B016D / B016E
Ihe owuwu plastik niile agaghị ada, nchara ma ọ bụ akụkpọ. Rolls rim na-agbakwunye ike, ọ dịkwa mfe ihicha.
58L Waste Akwụkwọ mkpokọta Bin-B-016A / B-016B / B-016C
Ọ na-abụkarị mpaghara niile ga-achịkọta obere akpa mkpofu ma ọ bụ buru ibu, ọ dị ha mkpa ịkwaga na ebe a na-ekpofu ahịhịa, mana ha dị oke oke ma buru oke ibu, mgbe ahụ, anyị ga-achọ gwongworo tilt. Nhazi nke ụgbọ ala zuru ụwa ọnụ bụ iji dozie nsogbu nke ihe mkpofu dị arọ na nke dị arọ iji mee ka nnukwu ihe mkpofu buru ibu na mpaghara mkpofu ikpeazụ ha.
Njehie ergonomic na-eme ka arụmọrụ dịkwuo elu ma na-ebelata nrụgide.